27 Zvino pazvakasarudzwa kuti tiende kuItari nechikepe,+ vakaisa Pauro nevamwe vasungwa mumaoko omumwe mukuru weuto ainzi Juriyasi weboka raAgasto. 2 Tichikwira chikepe chaibva kuAdramitiyumu chakanga chava kuda kuenda kunzvimbo dzaiva mumhenderekedzo yoruwa rweEzhiya, takatanga kufamba nechikepe, Aristako+ muMakedhoniya aibva kuTesaronika ainesu. 3 Zuva rakatevera takasvika kuSidhoni, uye Juriyasi akaitira Pauro mutsa+ kwazvo, akamubvumira kuenda kushamwari dzake kuti dzinomutarisira.+ 4 Tichibva ipapo takapinda mugungwa, tikaenda nechikepe takadzivirirwa neKupro, nokuti mhepo yaitidzivisa; 5 uye takafamba nomugungwa guru raiva pedyo neKirikiya nePamfiriya tikasvika pachiteshi chezvikepe chepaMaira muRikiya. 6 Asi ikoko mukuru weuto akawana chikepe chaibva kuArekizandriya+ chakanga chichienda kuItari, akaita kuti tichikwire. 7 Zvino, pashure pokunge tafamba nechikepe zvishoma nezvishoma kwemazuva akati, tikasvika kuKinidho tichinetseka, mhepo zvaisina kutibvumira kupfuurira, takafamba nechikepe takadzivirirwa neKrete paSarimoni, 8 uye tichitevedza mumhenderekedzo yacho tichinetseka, takasvika pane imwe nzvimbo yainzi Pokuzorora Pakanaka, pedyo nepaiva neguta reRaseya. 9 Nguva huru zvayakanga yapfuura uye zvino kwakanga kwava nengozi kuti tifambe nomugungwa nokuti kunyange kutsanya kwezuva rokuyananisa+ kwakanga kwatopfuura, Pauro akataura, 10 achiti kwavari: “Varume, ndinoona kuti kufamba nomugungwa kuchaita kuti pave nokuparara uye kurasikirwa kukuru, kwete nezvakatakurwa chete uye chikepe asiwo nemweya yedu.”+ 11 Zvisinei, mukuru weuto akateerera mufambisi wechikepe nomuridzi wengarava panzvimbo pezvakataurwa naPauro. 12 Zvino chiteshi chezvikepe zvachakanga chisina kukodzera kuti vapedzere mwaka wechando vari ipapo, voruzhinji vakati zvaiva nani kufamba nechikepe vachibva ipapo, kuti vaone kana zvimwe vaigona kusvika kuFonikisi kuti vanopedzera mwaka wechando ikoko, chiteshi chezvikepe cheKrete chakatarira kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva. 13 Zvakare, mhepo yokumaodzanyemba payakavhuvhuta zvinyoronyoro, vakafunga kuti vainge vatowana zvavaida, vakabvisa chinomisa chikepe, vakatanga kufamba vachitevedza mhenderekedzo nechomukati vachitevedza Krete. 14 Zvisinei, nguva huru isati yapera, mhepo yakasimba,+ ine mvura inonzi Yuroakwiro yakavhuvhuta nesimba pachiri. 15 Chikepe zvachakabatwa nesimba chikasakwanisa kuramba chakanangana nemhepo, takangochirega chikakukurwa. 16 Zvino takafamba takadzivirirwa nechimwe chitsuwa chiduku chainzi Kaudha, asi takatamburira kutora kachikepe+ kaiva shure. 17 Asi pashure pokukakwidza mukati, vakatanga kushandisa zvokusungisa kuti vasunge chikepe; uye vachitya kubatwa nejecha muSitisi, vakadzikisa zvinofambisa chikepe vakabva vangotorwa nemhepo. 18 Asi nokuti takanga tichisundwa zvakasimba nemhepo ine mvura, zuva rakatevera vakatanga kuita kuti ngarava irerukirwe;+ 19 uye pazuva rechitatu, vakarasa zvishandiso zvomuchikepe, nemaoko avo. 20 Zvino, zuva kana nyeredzi zvazvisina kuoneka kwemazuva mazhinji, uye mhepo huru ine mvura+ iri patiri, tariro yose yokupona kwedu yakatanga kupera pakupedzisira. 21 Nguva refu payakapera vachizvinyima zvokudya, Pauro akabva asimuka pakati pavo,+ akati: “Varume, chokwadi maifanira kunge makanditeerera musina kupinda mugungwa kubva kuKrete uye musina kuva nokuparara uye kurasikirwa uku.+ 22 Zvisinei, zvino ndinoti kwamuri farai, nokuti hapana kana mweya mumwe chete wenyu ucharasika, kunze kwechikepe chete. 23 Nokuti usiku huno ngirozi+ yaMwari wangu wandinoitira basa dzvene+ yamira pedyo neni, 24 ichiti, ‘Pauro, usatya. Unofanira kumira pamberi paKesari,+ uye, tarira! Mwari akupa kwazvo vaya vose vari kufamba newe nechikepe.’ 25 Naizvozvo varume, farai; nokuti ndinotenda muna Mwari+ kuti zvichava chaizvoizvo sokuudzwa kwandaitwa. 26 Zvisinei, tinofanira kukandwa panyika yakaoma pane chimwe chitsuwa.”+ 27 Zvino pahwakanga hwava usiku hwechigumi nohuna tichiri kungokandwa kuno nokoko mugungwa reAdriya, pakati pousiku vafambisi vechikepe vakatanga kufungidzira kuti vakanga vava kuswedera pedyo neimwe nyika. 28 Vakayera kudzama kwacho vakawana kuti akanga ari mafatomu makumi maviri; naizvozvo vakafamba zvishoma, vakayerazve kudzama kwacho vakawana kuti akanga ava mafatomu gumi nemashanu. 29 Vachitya kuti taigona kukandwa pane imwe nzvimbo pamatombo, vakakanda zvinotsigisa chikepe zvina vari shure, vakatanga kuti dai kwaedza. 30 Asi vafambisi vechikepe pavakanga vava kuda kutiza muchikepe, vakadzikisa kachikepe vachinyepedzera kuda kunodzikisa zvinotsigisa chikepe vari pamuromo wechikepe, 31 Pauro akati kumukuru weuto nevarwi: “Kana varume ava vakasaramba vari muchikepe, hamungaponeswi.”+ 32 Varwi vakabva vacheka tambo dzekachikepe+ vakakarega kachidonha. 33 Zvino pakwakanga kwava kuda kuedza, Pauro akatanga kuvakurudzira vose kuti vadye, achiti: “Nhasi ndiro zuva rechigumi nemana makangorinda uye muchiramba musingadyi, zvamusina chamadya. 34 Naizvozvo ndinokukurudzirai kuti mudye, nokuti izvi zvakanaka nokuda kwokuchengeteka kwenyu; nokuti hapana kana bvudzi+ romumusoro momumwe wenyu richaparara.” 35 Pashure pokutaura zvinhu izvi, akatorawo chingwa, akaonga+ Mwari ari pamberi pavo vose, akachimedura, akatanga kudya. 36 Naizvozvo vose vakafara, vakatanga kudya. 37 Zvino, isu tose, mweya yaiva muchikepe taiva mazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu. 38 Pavakanga vaguta nezvokudya, vakabva varerutsira+ chikepe nokukanda gorosi mugungwa. 39 Pakupedzisira kwaedza, havana kugona kuziva nyika iyoyo asi vakanga vachiona imwe mhenderekedzo yokuzororera ine jecha, vakabva vatsunga kuenda ikoko, kana vaigona, kuti vanomisa+ chikepe ipapo. 40 Naizvozvo, vachicheka zvinotsigisa chikepe, vakazvirega zvichiwira mugungwa, panguva iyoyowo vakasunungura tambo dzezvikwasviso zvedanda rokudzoresa uye, pashure pokusimudza seiri repamberi kuti ritarire mhepo, vakabva vananga kumhenderekedzo. 41 Pavakasvika pamurwi wejecha waiva mugungwa, vakamisa ngarava muromo wacho ukabatwa nejecha, ukaramba usingatsuguduki, asi kumashure kwakatanga kutyorwa-tyorwa nesimba.+ 42 Varwi vakasarudza kuuraya vasungwa, kuti parege kuva nevanoshambira, vakatiza. 43 Asi mukuru weuto aida kusvitsa Pauro akachengeteka, akavadzivisa zvavaida kuita. Akarayira vaya vaikwanisa kushambira kuti vasvetukire mugungwa, vatange kusvika kunyika yakaoma, 44 uye vamwe vose vaite saizvozvo, vamwe vari pamapuranga uye vamwe pane zvimwe zvinhu zvakabva muchikepe. Nokudaro vose vakasvika panyika yakaoma vakachengeteka.+